Instagram (matetika nohafohezina ho IG na Insta) dia sary amerikana sy fizarana serivisy tambajotra sosialy an'ny Facebook, noforonin'i Kevin Systrom sy Mike Krieger ary natomboka tamin'ny iOS tamin'ny Oktobra 2010. Navoaka tamin'ny Aprily 2012 ny kinova Android. , arahin'ny sehatr'asa voafetra misy fampiasa amin'ny Novambra 2012, fampiharana Fire OS amin'ny volana Jona 2014, ary fampiharana ho an'ny Windows 10 amin'ny Oktobra 2016. Io fampiharana io dia ahafahan'ny mpampiasa mampakatra haino aman-jery izay azo ovaina amin'ny sivana ary karakarain'ny tenifototra sy ny jeografika tagging. Ireo fizarana dia azo zaraina imasom-bahoaka na amin'ireo mpanaraka efa nekena. Ny mpampiasa dia afaka mizaha ny atin'ny mpampiasa hafa amin'ny alàlan'ny tag sy ny toerana ary mijery ny atiny fironana. Ny adsmember dia afaka mankafy sary ary manaraka ny mpampiasa hafa hanisy ny atiny ao anaty fahana, asa izay toa hajanona hatramin'ny volana septambra 2020.
Niavaka tamin'ny voalohany ny Instagram tamin'ny alàlan'ny famelana ny atiny hovolavolaina fotsiny amin'ny refin'ny lafiny 1 (1: 1) misy 640 teboka hifanaraka amin'ny sakan'ny fampisehoana iPhone tamin'izany fotoana izany. Tamin'ny 2015, ireo fameperana ireo dia nanalefaka tamin'ny fiakarana ho 1080 pixel. Nampidirin'ny serivisy koa ny endri-javatra fandefasan-kafatra, ny fahaizana mampiditra sary na horonan-tsary marobe ao anaty lahatsoratra iray, ary endri-javatra Stories - mitovy amin'ny Snapchat mpanohitra lehibe azy - izay mamela ny mpampiasa handefa sary sy horonan-tsary amin'ny fahana mifandimby, isaky ny lahatsoratra azon'ny hafa atao mandritra ny 24 ora avy. Hatramin'ny volana Janoary 2019, ampiasain'ny mpampiasa 500 tapitrisa isan'andro ny fampisehoana ny tantara.
Taorian'ny nanombohany ny taona 2010, nanjary nalaza haingana ny Instagram, miaraka amin'ireo mpisera voasoratra anarana iray tapitrisa ao anatin'ny roa volana, 10 tapitrisa ao anatin'ny herintaona, ary 1 lavitrisa hatramin'ny Jona 2018.  Tamin'ny volana aprily 2012, nahazo ny serivisy tamin'ny vola mitentina 1 lavitrisa dolara amerikana i Facebook. Tamin'ny Oktobra 2015, sary maherin'ny 40 miliara no nakarina. Na dia noderaina noho ny fitaomana azy aza, ny Instagram dia lohahevitry ny tsikera, indrindra ny fanovana ny politika sy ny interface, ny fiampangana ny sivana, ary ny votoaty tsy ara-dalàna na tsy ara-dalàna nampidirin'ny mpampiasa.
Hatramin'ny volana janoary 2021, ny mpilalao baolina kitra be mpanaraka indrindra dia Cristiano Ronaldo izay manana mpanaraka 253 tapitrisa mahery. Hatramin'ny 14 Janoary 2019, ny sary tena ankafizina ao amin'ny Instagram dia sarin'atody, navoakan'ny kaonty @world_record_egg, noforonina miaraka amin'ny tanjona tokana mba hihoatra ny firaketana taloha ny fitiavam-bola 18 tapitrisa tao amin'ny lahatsoratr'i Kylie Jenner. Ny sary amin'izao fotoana izao dia manana maherin'ny 54 tapitrisa. Instagram no lasa fampiharana finday faha-4 alaina indrindra tamin'ny taona 2010.
Ikonan'ny Instagram hatramin'ny 2016
Nanomboka ny fampandrosoana tao San Francisco ny Instagram tao amin'ny Burbn, fampiharana fizahana finday noforonin'i Kevin Systrom sy Mike Krieger. Fantany fa i Burbn dia nitovy loatra tamin'i Foursquare, i Systrom sy i Krieger dia namerina nanitsy ny fampiharana azy ireo tamin'ny fizarana sary, izay nanjary endrika malaza teo amin'ireo mpampiasa Burbn. Nantsoin'izy ireo ny anarana hoe Instagram, portmanteau an'ny "fakan-tsary" ary "telegram".
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Instagram&oldid=1000711"
Dernière modification le 27 Janoary 2021, à 05:42
Voaova farany tamin'ny 27 Janoary 2021 amin'ny 05:42 ity pejy ity.